Kuthetha ukuthini ukuphupha ngoMhlaba? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuchuma kwaye ngokukodwa ukuchuma kunakho kwaye uphupha umhlaba ungqina oko. Kuhleli kuye kuphela ukuba athathe ithuba lesigaba kwaye ke afune ukuqhubela phambili kwicala elinye. Into ephambili kukwazi ukuba ukujonga ngasemva akuyi kuba yinto elungileyo, kuba kukwenza ukhumbule lonke elidlulileyo.
Gcina ukhumbula ukuba ekuhambeni kwexesha, uyakuqonda ukuba iingxaki zimiselwe ukoyiswa. Uninzi lwemibuzo yakho luya koyiswa kwaye konke kubulelwe kukuzimisela kwakho. Xa ucinga ngokuyeka, khumbula ukuqhubeka kwaye uya kubona ukuba le yeyona nto ibalaseleyo.
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha umhlaba
2 iphupha lomhlaba omnyama
3 Phupha ukuba uphuze umhlaba
4 Iphupha lomhlaba owomileyo
5 Iphupha lomhlaba ochumileyo
6 Iphupha malunga nokudilika komhlaba
7 Ukuphupha ukuba utya ubumdaka
8 Ngaba iphupha lilungile okanye libi?
Kuthetha ukuthini ukuphupha umhlaba
Iphupha ngokwalo libonisa kakuhle ubomi bakho kwaye liya kuhlala linemiqondiso edibene nempumelelo. Nokuba kukwezothando, kwezezimali, okanye nokuba yinkalo yeengcali, ke konke okuseleyo kukuqhubeka. Eyona nto intle kuwe kukuba nomonde kwinkqubo yakho yokwenza izigqibo, kuba iyakukunceda kakhulu.
Ukuze utolike ngokuchanekileyo, kuya kufuneka wenze konke okusemandleni akho ukukhumbula zonke iinkcukacha. Inyani emva koku kukuba ukuphupha ngoMhlaba kufuneka uyazi yonke imeko. Ukukunceda, jonga ngezantsi kweentsingiselo eziqhelekileyo kwabo banolu hlobo lwamaphupha:
iphupha lomhlaba omnyama
Ngexesha elifutshane kakhulu unokufumana iindaba ezingayi kuba yinto elungileyo. Kuphela kukuthotywa esidlangalaleni okunokubonwa njengokuphela okanye njengendlela. Indlela yokukhula, ukufunda ukuhamba kwicala elifanelekileyo kwaye ekugqibeleni uyakubona ukuba kulungile.
Zama ukuxabisa amava kwaye ngaphezulu kwako konke ukuqonda ukuba yintoni eyenze ukuba ingasebenzi ngendlela eyiyo. Eyona nto intle kuwe kukuqonda ukuba nokuba kukho into engahambi kakuhle, lixesha lokuba uqhubeke.
Phupha ukuba uphuze umhlaba
Ukwanga umhlaba akuhlali kakuhle kwaye kunokubonisa isidingo esikhulu sokujonga kwakhona isimo sakho sengqondo. Ke ngoko, eyona nto ibalulekileyo kuwe kukuqonda ukuba ukuphupha umhlaba uphuziwe akulunganga. Ukuba uyakwazi ukucwangcisa isenzo sakho, uya kufezekisa iinjongo onazo.
Ukuze yonke into isebenze, umthambo olungileyo awuzukuthatha zigqibo xa uphantsi koxinzelelo. Ukuba uyakwenza oku, ithuba lokusebenza kwalo liya kuhlala liphezulu kakhulu kwaye iya kuba yinto elungileyo kuye wonke umntu.
Iphupha lomhlaba owomileyo
Ubunzima bezezimali ngelishwa buza kuba yinxalenye yobomi bakho kwaye eli lixesha lokutshintsha indlela ocinga ngayo. Khumbula: ukuba neziphumo ezahlukeneyo, kuya kufuneka wenze ngokwahlukileyo. Kuyaphambana ukwenza into yesiqhelo kwaye ufuna ukuba inyani yakho itshintshe, kuba ayizukusebenza kakuhle.
Ukuba ufuna ukupasa eli nqanaba, ingcebiso ebalulekileyo kuwe inokuba kukuhlawula ngakumbi iindleko. Zama ukuthintela inkcitho engeyomfuneko kwaye kancinci kancinci yonke into iya kuba phantsi kolawulo.
Iphupha lomhlaba ochumileyo
Kukho ithuba elihle lokuba umntu osondele kakhulu kuwe angakhulelwa kwaye kuya kukhawuleza kakhulu. Mhlawumbi umntu ngeli xesha sele ezama ngazo zonke iindleko ukuba ukukhulelwa kwenzeke. Konke okuseleyo ukwenziwa kukuthatha eli thuba ukuzilungiselela kwaye konke kuya kusebenza.
Kungaphezulu kokufanelekileyo ukukhankanya omnye umba oya kufaneleka kwaye unxulunyaniswe nolindelo olwenziwe. Kunqande ukucinga ngayo kwaye, ngaphezulu kwako konke, phuma uye ushiye iindaba, kuba olu hlobo lwento luya kuhamba ngendlela yakho.
Iphupha malunga nokudilika komhlaba
Utshintsho lunokuba luhle kwaye lube lubi, ke eyona nto iphambili kukusebenzisa eli thuba. Eyona nto iphambili kuwe kukuqonda ukuba izindlu ziye zawa okanye hayi, kuba oko kuthetha ukuba inxulumene nale nto.
Ukuba indlu iyawa, luphawu oloyikisayo kwaye kuya kufuneka wenze konke okusemandleni akho ukunqanda ukuzama utyalomali olutsha. Ukuba umhlaba ubhukuqiwe kwaye awuchaphazeli indlu, oku kuya kuboniswa lutshintsho olulungileyo. Ngalo lonke ixesha khumbula ukuzama ukuqonda umxholo owenzeke kweli phupha.
Ukuphupha ukuba utya ubumdaka
Ukuphupha umhlaba njengokutya luphawu lokuba kuya kufuneka ulumke xa utya.
Zama ukumisela ugqirha kangangoko unako ukuze ufumane isishwankathelo sento eqhubekayo. Akukho nto ibaluleke ngakumbi kuwe njengokukhathalela impilo yakho, kuba iyinto esebenzayo.
Ngaba iphupha lilungile okanye libi?
Ukubonakaliswa kweli phupha kulungile, kuba kuzisa utshintsho olulungileyo kwaye kukunika indlela yokoyisa ezo zingalunganga. Eyona nto ibaluleke kakhulu kuwe kukuqonda ukuba ubunzima ngalunye luthetha ithuba lokukhula ngakumbi kwicala elifanelekileyo. Kwaye uyithandile intsingiselo yokuphupha malunga nomhlaba?